Department of Health and Human Services Victoria | Coronavirus (COVID-19) - Somali
Coronavirus (COVID-19) - Somali
Isbedelida Xanibaadaha oo kooban
Haddii aad wax saluugto , wac Khadka degdega ah ee coronavirus 1800 675 398 (24 saac).
Haddii aad u baahan tahay tujumaan, ka wac TIS National 131 450.
Fadlan u heyso Saddexda Eber (000) xaalada degdega ah oo kaliya.
Waxaa waajiba in aad xasuusato
Waxaa waajiba in aad xirato daboolaha sanka iyo afka markaad guriga ka baxdo.
Ilaali masaafa amaana ugu yaaraana u jirta 1.5 mitir kuwa kaleeto.
Joogto u dhaq gacmahaaga
Haddii aad dareento xanuun, guriga joog. Shaqo ha aadin.
Ku qufac ama ku hindhis tishiyuu ama xusulkaaga.
Haddii aad leedahay astaamaha coronavirus (COVID-19), waxaa waajiba inaad isbaarto
Baarista coronavirus waa u lacag la’aan qof walba. Kuwaas waxaa ku jira dadka aan haysan medicare, sida qof dibada ka soo booqdey, shaqaalaha soogalootiga ah iyo magangelya doonka.
Heerarka xanibaadaha hadda ee Fiktooriya
Qorshaha lagu khafiifinayo xanibaadaha iyo talaabooyinka Fiktooriya ku noqonayso COVID Normal waxaa lagu sheegay coronavirus (COVID-19) qorshaha dib loogu furayo.
Waxaa jira hal qorshe oo nawaaxiga Melbourne iyo midka gobolada Fiktooriya.
Sarkaalka Madaxa Caafimaadka (Chief Health Officier) ayaa bedeli kara xanibaadyada haddii xaalladu isbedesho.
Talaabada labaad: laga bilaabo 28da Sebteembar 2020 nawaaxiga Melbourne.
Ma jiri doono bandow dambe nawaaxiga Melbourne laga bilaabo 5subaxii maalinta bishu tahay 28da Sebteembar 2020.
Waad uga tegi kartaa guriga markaad rabto afar sababood midkood:
Soo gadashada cunto ama sahay muhiima
Jimicsi (dibada oo xadadan)
Shaqo la ogolaaday
Daryeel bixin, sababa samafaleed ama raadinta daaweyn caafimaad.
Jimicsiga iyo soogadashada waxyaallaha lagama maarmaanka ah, waxaana waajiba in aadan 5 KM ka fogayn gurigaaga.
Laga bilaabo waqtigaan.
Ilaa shan qof oo ka scoda laba qoys ayaa isku arki kara dibada
Waxaa jiraya ku noqosho dugsiyada oo u habeysan heerar ardada ku jirta bareeb ilaa heerka 6aad, VCE/VET/VCAL, iyo dugisyada takhasuska ah ee teeramka 4aad.
Daryeelka ilmuhu dib ayuu u furmayaa
Dhowr goobood oo shaqo ayaa furmi kara.
Goobaha dabaasha ayaa dib loo furayaa, tababarid shakhsiyeed ilaa hal tababare labadii qofba.
Kulamada diimeed ee dibada ah shan qof iyo iimaanka ayaa la ogol yahay.
Aroosyada waa loo ogol yahay guriga dibadiisa ilaa 5 qof (kuwaas waxaa ku jira labada isguursanaya iyo labada markhaantiga ah).
Waxaa ku ganaaxi karaa Booliiska Fiktooriya ilaa $4,957 haddii aad u safartid gobolada Fiktooriya sabab aan sharciyeysnayn. Waxaa kaloo lagugu ganaaxi karaa haddii aad ku aragtay saaxiibo iyo qoys aadan la noolayn koox ka badan shan qof guriga dibadiisa. Waa lagu ganaaxi karaa haddii saaxiibo ama qoys ku soo booqdaan sabab meel mar ah la’aanteed, sida daryeel bixin.
Talaabada saddexaad: haddii ay jiro iskucelcelis ka yar shan xaalladood oo cusub (Dawlad Goboleedka oo dhan) 14kii berri ee ugu dambaysay (Dawlad Goboleedka oo dhan) iyo haddii khubarada caafimaadku ogolaadaan.
Laga bilaabo waqtigaan:
Ma jiri doono bandow mana jiri doonaan xanibaadyo ka bixida guriga ama fogaanshaha aad u safri karto.
Ilaa 10 qof ayaa dibada ku kulmi kara.
Waxaa iman kara gurigaaga ilaa shan qof oo marti ah oo meel kale ka imanaya. Waa inay isku guri yihiin.
Ardada ku jirta heerka 7aad ilaa heerka 10 waxaa laga yaabaa inay awoodan inay ku noqdaan dugsiga haddii tirada kaysasku aad u hooseeyaan iyo haddii khubarada caafimaadku ogolaadaan.
Dukaamada iyo goobaha timaha ayaa dib loo furi doonaa
Makhaayadaha iyo goobaha kafeega ayaa la furi karaa adeeg banaanka la fariisanayo xadkuna wuxuu ahaanayaa 10 qof.
Soo noqosho heerar leh oo dibada ah cayaaraha aan la istaabanayn ee dadka waaweyn. Cayaaraha dibada ahi waxay dib ugu bilaabanayaan dadka ka yar 18 sanadood (la istaabanayo ama aan-la-istaabanayn.
Talaabada ugu dambaysa: Iyada oo ku xiran talada caafimaadka dadweynaha iyo haddii aanay jirin xaallada cusubi 14kii berri ee la soo dhaafay khubarada caafimaadkuna ogolaadaan.
Laga bilaabo waqtigaan
Ilaa 50 qof ayaa isugu iman kara banaanka
Waa iman karaan gurigaaga ilaa 20 qof oo marti ah
Dhamaan dukaamadu waa furan yihiin.
Makhaayadaha iyo goobaha kafeega waa la furi karaa tira gaaraysa 20 kuraasta la fariisanayo oo gudaha ah, iyo xad 50 qof ah oo macaamiilla.
Cayaaruhu waa soo noqon karaan, waxaase shardi ah talaabooyinka amaanka. Cayaaraha la istaabanayo waa soo noqoyaan da’walba.
Arooska iyo aaska waxaa iman kara ilaa 50 qof.
Cibaadaysiga dadweynaha ayaa soo noqonaya, waxaase shardi ah xeerka afar mitir oo isku wareeg ah.
COVID Normal: Haddii aanay kaysas cusub dhicin 28 berri, oo aanay jirin dad u jiran (dawlad Gobolka oo dhan), oo aanu jirin welwel cudura ka dilaaca Australia, ayna ogolaadaan khubarada caafimaadka.
Xanibaadyada ayaa la khafiifiyey ama kor loo qaaday iyada oo ku xiran xalllada amaanka
Waxaa jiri doonta soo celin heerka goobta shaqada ee dadka guriga shaqada ku soo qabanayey.
Ma jiro xad arooska iyo aaska.
Ma jiro xad kulamada iyo booqashada guriga.
Laga soo bilaabo 11:59 fiidnimo 16ka Sebteembar 2020 gobolada Fiktooriya gudahooda.
Ma jiraan xanibaadyo sababa la xiriira inaad guriga ka baxdo ama fogaanshaha aad ugu safri karto gobolada Fiktooriya.
Ma jiraan xanibaadyo ama sababo looga tago guriga ama fogaanshahaad safri karto.
Ilaa 10 qof ayaa isugu iman kara banaanka.
Waxaa kugu soo booqan kara ilaa shan qof gurigaaga kuwaas oo ka yimid qoys kale. Kuwa ku soo booqanayaa waa inay isku guri ka yimaadeen. Waxaad awoodaa inaad xulato qoys kale oo ku soo booqan kara inta lagu jiro xanibaada. Carruurta ka yar 12 sanadood da’ ahaan tirada kuma jiraan.
Makhaayadaha iyo goobaha koofeega oo leh adeeg banaanka la fariisanayo, koox aan ka badnayn 10 qof.
Waxaa jira soo noqosho leh heerar cayaaraha banaanka oo aan la istaabanayn ee dadka waaweyn. Cayaaraha dibada waa soo noqonayaan wixii ka yar 18 sanadood (kuwa la istaabanayo iyo kuwaan la istaabanayn).
Talaabada ugu dambaysa: Iyada oo ay ku xiran tahey talada caafimaadka dadweynaha iyo haddii aanay jirin kaysas cusub (Dawlad Goboleedka oo dhan) 14kii berri iyo iyada oo ku xiran tahey talada khubarada caafimaadka.
Laga soo bilaabo waqtigaan
Ilaa 50 qof ayaa dibada ku kulmi kara.
Waxaa kuugu iman kara 20 qof oo martiya gurigaaga.
Dhamaan dukaamadu waa furan yihiin
Makhaayadaha iyo goobaha kafeega ayaa u furi kara koox aan ka badnayn 20 qof gudaha adeeg la fariisanayo oo ku eg 50 qof isu geyn ahaan.
Cayaaruhu waa furnaan karaan, waase in la raaca shuruudaha amaanka. Cayaaraha la istaabanayo waa la soo celinayaa da’ walba.
Arooska iyo aaska waxaa u iman kara ilaa 50 qof.
Cibaadada dadweynaha ayaa soo noqonaysa, waxaase shardi ah xeerka afar mitir oo isku wareega.
Xanibaadyadii ayaa la khafiifiyey ama la qaaday, waxayase ku xiran tahay shuruudaha amaanka.
Soo noqosho heerar leh oo goobta shaqada dadka guriga ku shaqaynayey.
Ma jiro xad u dhigan arooska iyo aaska.
Xad ma laha isu imaanshah iyo martida gurigu
Sida loo nabad galo caafimaadna loo ahaado
Coronavirus (COVID-19) ayaa weli nala jooga kuna fidi kara si degdeg ah. Si loo caawimo qoysaskeena iyo bulshadeena, dhamaanteen waa in aan qaadaana doorkeena.
Halkaan waxaa jira waxyaalla sahlan oo aad samayn karto si aad amaan u ahaato.
Ku dhaq gacmahaaga saabuun iyo biyo ugu yaraan 20 ilmiriqsi.
Ku qufac kuna hindhis tiishiyuu ama xusulkaaga.
Ka fogow masaafo amaana ugu yaraan 1.5 mitir kuwa kale.
Gasho kan wajiga adoo daboollaya sankaaga iyo afkaaga haddii aad guriga ka tegayso.
Aad caafimaadkaaga meel lagu baaro.
Haddii aad jiran tahay, guriga joog. Ha booqan qoys shaqana ha aadin.
Isbaar haddii aad leedahay wax astaama ah ka dibna toos guriga u aad.
Kaalmada la helli karo
Haddii aad ka welwelsan tahay inaad lumiso dakhligaaga intaad sugayso natiijada baaritaanka, waxaa laga yaabaa in mudan tahay $450 coronvirus (COVID-19) Lacagta Baaritaanka Is-gooni-yeelida (Test Isolation Payment)
Haddii lagaa helo cudurka ama aad u dhowdahay qof laga hellay cudurka, waxaa laga yaabaa inaad xaq u leedahay lacag dhan $1,500. Macluumaad intaas ka badan wac Khadka coronavirus-ka oo ah 1800 675 398. Haddaad u baahan tahay mutarjum, fadlan riix eber (0).
Haddii adiga ama qof kale oo aad taqaanaa dareemayo walaac iyo dareen, waxaad wici kartaa Lifeline 13 11 14 ama Beyond Blue oo ah 1800 512 348. Haddii aad u baahan tahay mutarjum wac 131 450.
Haddii aad daremayso cidla, waxaad wici kartaa Khadka coronavirus (COVID-19) 1800 675 398 riixna saddex (3). Waxaa lagugu xiri doonaa qof tabaruce ah oo ka socda Laanqayrta Cas ee Australiya kaas oo kugu xiri kara adeega kaalmada agagaaraha.
Qof kasta oo reer Fiktooriya ah oo jira 12 sanadood ama ka weyn waxaa waajib ku ah inuu xirto waji daboolle markuu guriga ka baxayo, haddii aanay haysan sabab sharci ah oo aanay ku qaadanayn. Tusaale ahaan:
Haddii aad qabto xaallad caafimaad sida dhibaato daran oo la xiriirta maqaarka wajigaaga, ama dhibaato neefsasho
Haddii aad gaariga ku jirto, ama keli ahaw ama qof qoyska ahi ha kula socdee
Hadii aad samaynaysid jimicsi aad u adag, laakiin weli waxaa waajib ah inaad qaadato waji daboolle.
Laga bilaabo 11:59 duhurkii 11ka Oktoobar waxaa waajiba inaad waji daboole ama maaska daboola sanka iyo afka. Ma qaadan kartid gaashaanka wajiga oo keliya.
Isbaarida iyo is-gooni yeelida
Haddii aad leeadahay astaamaha coronaviruska (COVID-19), waxaa waajib kugu ah inaad isbaarto gurigana joogto ilaa aad ka hesho natiijada. Ha aadin shaqada ama dukaamada.
Astamaha coronavirus-ka waxaa ka mid ah:
Qandho, dhaxan iyo dhidid
Qufac iyo cuna xanuun
Neefta oo kugu adag
Sanka oo biya kaa socdaan
Dhadhanka iyo urka oo kaa luma
Coronavirus-ka (COVID-19) baaritaanku waa u lacag la’aan qof walba. Kan waxaa ku jira dadka aan haysan kaarka medicare, sida booqdayaasha dibada ka yimid, shaqaalaha soo galootiga ah iyo magangelyo doonka.
Haddii lagaa hello coronavirus (COVID-19) waxaa waajib kugu ah inaad isku gooni yeesho gurigaaga. Macluumaad intaas ka badan arag Wixii la samaynayo haddii lagaa hellay coronavirus-ka (COVID-19) (Eray).
Haddaad aad ugu dhowdahay qof qaba coronavirus (COVID-19) waxaa waajib kugu ah inaad is-karantiinto 14 berri. Macluumaad intaas ka badan arag Waxa la samaynayo haddaad aad ugu dhoweyd qof qaba coronavirus (COVID-19) (Eray).
Fadlan isticmaal qalabka hoose kulana wadaag bulshada email, warbaahinta bulshada, ama shabakadaha kale ee bulshada.
Baarista iyo isgooni-yeelida
Waxaad samaynayso haddii lagaa hellay coronavirus (COVID-19) - What to do if you've tested positive for coronavirus (COVID-19) – Somali (Word)
Waxaad samaynayso haddii lagaa hellay coronavirus (COVID-19) - What to do if you've tested positive for coronavirus (COVID-19) – Somali (PDF)
Waxaad samaynayso haddii aad u dhowayd qof qaba coronavirus (COVID-19) - What to do if you have been in close contact with someone with coronavirus (COVID-19) – Somali (Word)
Waxaad samaynayso haddii aad u dhowayd qof qaba coronavirus (COVID-19) - What to do if you have been in close contact with someone with coronavirus (COVID-19) – Somali (PDF)
Coronavirus (COVID-19) Baaristu waa degdeg, amaan, waana sahal - Coronavirus (COVID-19) testing is quick, safe and easy (Word)
Coronavirus (COVID-19) Baaristu waa degdeg, amaan, waana sahal - Coronavirus (COVID-19) testing is quick, safe and easy (PDF)
Baadhitaanka Coronavirus (COVID-19) - Testing for coronavirus (COVID-19) fact sheet - (Word)
Baadhitaanka Coronavirus (COVID-19) - Testing for coronavirus (COVID-19) fact sheet - (PDF)
Boostar – Isbaar dash Somali - Poster - Get tested - Somali (PDF)
Astaanta warbaahinta bulshada dash Haddii aad leedahay wax astaama ah, isbaar dash Somali - Social media tile - If you have any symptoms, get tested – Somali (JPG)
Amaan ku joogida
Qorshaha COVIDSafe ee Khatarta Sare ee Goobaha shaqada Victoria - High Risk COVIDSafe Plan for Victorian Workplaces (Word)
Qorshaha COVIDSafe ee Khatarta Sare ee Goobaha shaqada Victoria - High Risk COVIDSafe Plan for Victorian Workplaces (PDF)
Isbedelida Xanibaadaha oo kooban - Summary of changes to Stage 4 restrictions – coronavirus (COVID-19) – Somali (PDF)
Hoos u dhig khatarta coronavirus-ka (COVID-19) - Reduce your risk of coronavirus (COVID-19) poster (Word)
Hoos u dhig khatarta coronavirus-ka (COVID-19) - Reduce your risk of coronavirus (COVID-19) poster (PDF)
Boostar – 3 siyaabood oo amaan lagu ahaanayo dash Somali - Poster – 3 ways to stay safe – Somali(PDF)
Dabool qufacaaga iyo hindhisadaada - Poster - Cover your cough and sneeze
Si joogto ah u dhaq gacmahaaga - Poster - Wash your hands regularly
Lacagta Fasaxa Musiibada Safmarka ee $1500 - $1500 Pandemic Leave Disaster Payment (PDF)
Lacagta Fasaxa Musiibada Safmarka ee $1500 - $1500 Pandemic Leave Disaster Payment (Word)
Hoos u dhig khatarta coronavirus-ka (COVID-19) - How to access support (Word)
Sida loo galo adeegyada aad u baahan tahay - Factsheet - How to access the services you need (Word)
Xidhmooyinka Gargaarka Degdega ah - Emergency relief packages fact sheet (Word)
Xidhmooyinka Gargaarka Degdega ah - Emergency relief packages fact sheet (PDF)
Sida lagu hello kaalmo haddii aad dareentid amni daro, welwel ama walaac inta lagu jiro karoonofeyras (COVID-19) - Emergency support fact sheet - (Word)
Sida lagu hello kaalmo haddii aad dareentid amni daro, welwel ama walaac inta lagu jiro karoonofeyras (COVID-19) - Emergency support fact sheet - (PDF)
Taageerida rabshada qoyska – guryaha dadweynaha - Family violence support – public housing estates (Word)
Sida loo gashadu maaskiga wajiga - How to wear a face mask - Somali (Word)
Sida loo gashadu maaskiga wajiga - How to wear a face mask - Somali (PDF)
Sida loo sameeyo marada maaskiga - Design and preparation of cloth mask - Somali (PDF)
Sida loo sameeyo marada maaskiga - Design and preparation of cloth mask - Somali (Word)